Al Shabaab Oo Sheegatay Weerarkii Jaziiradda Lamu Digniinna udirtay Dalxiisayaasha Reer Galbeedka Ee Kenya Ku Sugan.
Monday June 16, 2014 - 17:21:13 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay mas'uul ka ahaayeen weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay deegaanka Mkepetoni oo hoos yimaad Jaziiraddaa Lamu.
Burbur ka dhashay Weerarkii Mkepetoni 16 June,2014
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxay sheegtay in weerarkan uu aargud u ahaa culimada muslimiinta ee lagu xasuuqay magaalada Mombaasa ee gobolka xeebaha Kenya waxaana xasuuqaasi mas'uul ka ahaa ciidamada Ammaanka xukuumadda Uhuru Kenyatta.
Warka kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu faah faahiyay goobaha ciidamada muslimiintu weerareen waxaana kamid ah Hoteello,Banki iyo saldhig boolis oo ciidamada dowladda Kenya ay ku sugnaayeen.
Bayaanka kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu yiri "Haku riyoona abid in aan nabad gelyo ugu noolaataan dhulkiina inta ay ciidankiinu dalkeena ku gummaadayaan shacabka soomaaliyeed ee aan waxba galabsan”.
Shabaabul Mujaahidiin waxay digniin kulul siisay dadka ajaanibta dalxiisayaasha ah ee Kenya ku sugan waxaana loo sheegay in Kenya ay tahay furin dagaal.
Sidoo kale waxaa bayaanka lagusoo hadal qaaday qaabkii uu u dhacay weerarkii Jaziiradda Lamu iyadoona ciidamada mujaahidiinta ay muddo 10 saacadood ah gacanta ku hayeen deegaanka laweeraray "Haku riyoona abid in aan nabad gelyo ugu noolaataan dhulkiina inta ay ciidankiinu dalkeena ku gummaadayaan shacabka soomaaliyeed ee aan waxba galabsan” ayaa lagu yiri bayaanka.
Maamulayaasha dalka Kenya ayaa sheegay in weerarkii xalay ka dhacay Mkepetoni ay ku dhinteen 50 qof islamarkaana laga yaabo in khasaaraha dhimashada ah uu sii kordho.
Xarakada Al Shabaab ayaa dalka soomaaliya kula dagaalamaysa in kabadan 6 dowladood Afrikaan soo duulayaal ah oo Kenya ay kamid tahay kuwaasi oo ciidamadoodu gabood fallo ugeysanayaan shacabka Soomaaliyeed islamarkaana boobaya kheyraadka uu leeyahay dalka hooyo.
Ammaanka Kenya ayaa sanadadii lasoo dhaafay faraha kasii baxayay tan iyo markii ay ciidanka Kenya duullaanka gar darrada ah ku qaadeen gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose ayna qabsadeen magaalooyin iyo deegaanno Soomaali leedahay.
Mahad Yare SomaliMeMo
Dowladda Farmaajo oo cayrisay safiirkii Kenya ufadhiyay magaalada Muqdisho.
Weerar 2 askari lagu dilay oo ka dhacay galbeedka Muqdisho.
Sarkaal katirsanaa Melleteriga Kenya oo lagu dilay gobolka Jubbada Hoose.